အနော်ရထာကို ဘာ့ကြောင့် ထိုင်းတွေချစ်တာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အနော်ရထာကို ဘာ့ကြောင့် ထိုင်းတွေချစ်တာလဲ
Posted by phone_kyaw on Mar 22, 2012 in Copy/Paste |9comments
နောက်ပြီး သူတို့ ကဗမာကို အားကိုးတယ်။ ရွံလည်း ရွံတယ်။ ကြောက်လည်းကြောက်တယ်။ အားမကိုးလို့ လည်း မရဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗမာတွေပဲ…လက်ရှိထိုင်းကိုလုပ်ကျွေးနေတာ။ ဘန်ကောက်က လျှပ်စစ်မီးနဲ့ ကားတွေကိုမောင်းနေတာက ရခိုင်က ဂက်စ်နဲ့ မောင်းနေတာ။ အလုပ်သမားကလည်း ဗမာပဲ။ ယိုးဒယားတွေအလုပ်က ဖာခံတာပဲရတယ်။ မယုံရင် ထိုင်းကိုလျှောက်လည်ကြည့်။ ဖာမတွေလမ်းပေါ်မှာနည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဖာခန်းတွေလည်းနည်းတာမဟုတ်ဘူး။
ရခိုင်ဘုရင် ဆိုတာ မင်းစောမွန် ထင့်…
ဘုရင့်နောင် အကြောင်းပြီးရင် ဘယ်အကြောင်းကိုရေးစေချင်လဲဟင်…ဟား
ဘုရင့်နောင် အကြောင်းရေးရင် ပေါ်တူဂီ ကောင် ဖင်ကွဲပြီး သေတဲ့ အကြောင်းပါ ထည့်ရေး ဗျို့ ။
ခင်ဗျားရေးနေကြ xီး တို့ ၊ xင်ပြဲသည် တို့ နဲ့ ဆို ၊ ဖတ်ရတော်တော် ကောင်းမှာဘဲ ။
မြန်မြန်လေးသာရေး ။ ဟဲဟဲ
ကိုဘုန်းကျော်တို့က မဆိုးဘူး ရခိုင်ဘုရင်ဖင်ခေါင်းကျယ်တာလဲသိ၊ ကိုသိန်းစိန်ကြီး ကပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်း ဆိုတာလဲသိ။ ဒီလူ အတွင်းသိအစဉ်းသိပဲ။ :-) ဘုရင်နောင်ရေးပြီးရင် ချင်ဗျားပြောတဲ့ ကျပ်မပြည့်တဲ့သူအကြောင်းရေးပါလို့ …
နောက်လည်း ယိုးဒယားက ကောင်မလေးတွေအကြောင်းရေးပါအုန်း
အူးဖုန်းကျော်ပြောတာမှန်တယ် ဗျ ယိုးဒယားတွေကအလုပ်မလုပ်စားတတ်ဘူး အူးဖုန်းကျော်ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲ
ကောင်းကောင်းလုပ်စားနိုင်တာမျိုးတွေ တစ်ခါချင်းမိုင်ဘက်ကို အောက်လမ်းကနေဝင်လည်ရင်း ချင်းမိုင်က
ခေါ်သွားတယ် ဆရာသမားက ဟိုမှာကိုယ်ပိုင်ကားတွေဘာတွေနဲ့ကြီးပွားလို့ဆိုတော့ သူ့ကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်
ဆိုပြီးတော်တော်ကြာတယ်ဗျ အဲဒီ့အချိန်အတောအတွင်း ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဂျစ်ပစီတစ်ကောင်ရောက်လာတယ်
ဘိုလိုတွေဘာတွေနဲ့ကပ်ပြီး ခင်ဗျားကဧည့်သည်ထင်တယ်တဲ့ ဧည့်သည်ဆိုရင်ဘန်ကောက်ရောက်ရင်
ကိစ္စတစ်ခုအမြဲလုပ်လေ့ရှိတယ်တဲ့ အဲဒီ့ကိစ္စမှလုပ်ပြီး မပြန်ဘူးဆိုရင်ဘန်ကောက်ရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်
ဘူးတဲ့ ငနာလေးပြောလိုက်ပုံကတော့ဒီလိုဗျို့။ ဘိုလိုမတတ်တခေါက်နဲ့…………
If you once in bangkok. You should bang your kok at least once.တဲ့ဗျာ အစကတော့
ကြောင်သွားတယ် သူဆိုလိုချင်တာဘာလဲပေါ့ နောက်မှသတိရတယ် ကောက်(kok)ဆိုတဲ့စကားက
ယိုးဒယားလို ဦးအောင်ဇေယျရဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုပြောတာ ဘန်းက ထုနှက်ဆောင့်သည် ဆိုတော့ ………….
အူးဖုန်းကျော်ရေ သူက ကောင်မလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်သူနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောလေတော့ ဘန်ကောက်
ဆိုတဲ့မြို့က ဒီငနဲဖွင့်တဲ့ definitionအတိုင်းဆိုရင်တော့ အင်း……………………
ကိုဖုန်းကျော်သမိုင်းရေးတာ မော်ဒန်ဆန်သား …ဟဲ ဟဲ
ငဇင်ကာကို xင်ခံ တဲ.အကြောင်း ……။
“နတ်ရှင်နောင်အကြောင်းရေးဦး ။ငဇင်ကာကို xင်ခံ တဲ.အကြောင်း ……။ ”
အဲ့လိုတော့မပြောသင့်ဘူးထင်တယ် surmi ရေ နတ်ရှင်နောင် ဆိုတာ အကောင်းဆုံးရတုတွေကို ရေးခဲ့တဲ့ စာဆိုတော့ကြီးပါ။ သူလိုလူမျိုးကရှားပါတယ်။ သူ့အကြောင်း ကွဲလွဲချက်တွေလဲရှိပါတယ်။ သမိုင်းဆိုတာ သာနေတဲ့သူဘက်က ပိုပိုသာသာလေးရေးထားလိမ့် မယ်ဟုထင်မိပါတယ်။ သူ့ ရတုတွေကိုလဲနဲနဲလောက်ရှာဖတ်ကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်။ (ဂူလီသဘင် တို့ဆိုသိပ်ကောင်းဗျား)